Mogadishu Journal » 2021 » February » 15
Turkey had earlier summoned US ambassador to Ankara, infuriated by conditionality of a US statement on the deaths of 13 Turks. 15 Feb 2021 The United States has attempted to de-escalate a diplomatic dispute with NATO ally Turkey, which had earlier summoned the US ambassador about...
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ayaa caawa kulan la qaatay Guddiga Farsamo ee Qaban-qaabada Shirweynaha Wadatashiga ee maanta soo gaaray Magaalada Baydhabo. Laftagareen ayaa dardaaran iyo dhiiragelin u jeediyay xubnaha guddiga in shirkooda natiijo wanaagsan ka...
Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Somalia Yuusuf Garaad Cumar, haatana ah Ergayga gaarka ah ee Madaxweynaha Somalia u qaabilsan Geeska Afrika, Badda cas iyo gacanka Cadmeed ayaa shan su’aalood ka keenay bannaanbax ay musharaxiinta Mucaaradka shaaciyeen iney Jimcaha Muqdisho ku...
Wasiirka Caafimaadka df iyo Safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis ay dowladda Talyaaniga ku taageereyso qaar ka mid ah Isbitaalada dalka. Heshiiskan oo ku kacaya Saddex Milyan oo UERO waxay dowladda Talyaaniga ugu talogashay in wax looga qabto qaar...
Xukun Dil ah oo maanta lagu riday Geedow Maxamed Fiidow (Daawo Sawirro)
Maxkamada Darajada koowad ee Ciidamada Qalabka sida Qeybta 60-aad ayaa maanta xukun dil ah ku riday askari katirsanaa ciidanka Daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed oo qof shacab ah ku dilay magaalada Buurhakaba. Dable Geedow Maxamed Fiidow oo 23 sano jir ah ayaa Maxkamada...
Ra’isul Wasaare Rooble oo kulan Sagootin ah la qaatay Ben Fender (Daawo Sawirada)
Muqdisho:-Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaliya Mudane, Ben Fender, oo mudo xileedkiisu dhamaaday. Rooble iyo Safiirka ayaa kulankan sagootinta ah intii uu socday ka...
Waxaa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ku geeriyooday Senatar Maxamed Yuusuf Xaaji oo ahaa 80-sano jir katirsanaa aqalka sare ee Baarlamaanka dalka Kenya kana mid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan uguna saameynta badnaa Soomaalida Kenya. Maxamed Yuusuf Xaaji oo soo noqday...
Security forces urged to refrain from violence after opening fire on anti-coup protesters amid reports of an internet shutdown. 14 Feb 2021 Armoured vehicles have rolled into Myanmar cities and internet access has been largely cut off amid fears of a crackdown on anti-coup...
Awood gudbinta Ederson waxaa amaanay maamulaha Manchester City Pep Guardiola. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa calaamadeeyay baasaska Ederson intii ugu fiicneyd ee uu ka arko goolhaye. Baas dheer oo uu ka helay Ederson ayaa dhigay goolhayaha Ilkay Gundogan kulankii...
Muqdisho:-Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen Odowaa oo ka tirsan golaha shacabka Somalia ayaa ka hadlay dhagxaan xalay lagu xiray qeyb ka mid isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho. Odowaa ayaa dhagxaantaas eedeeyey inuu amray Madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday ee Maxamed...
Cudurka Ebola oo mar kale ka dilaacay dal ku yaalla galbeedka Afrika (Sawirro)
Cudurka Ebola ayaa sanado ka dib mar kale ka dilaacay dal ka tirsan Galbeedka qaarada Afrika xili dunida ay weli dagaal ba’an kula jirto cudurka Corona. Ugu yaraan 3 qof ayaa u dhintay cudurka Ebola gudaha dalka Guinea, halka cudurka laga helay shan qof oo kale, sida ay...